ओलीले फेरी मन्त्रीपरिषद फेरबदल गर्दै, को-को बन्दैछन नयाँ मन्त्री ? यस्तो छ तयारी — Sanchar Kendra
१नेपालगञ्जमा बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै
ओलीले फेरी मन्त्रीपरिषद फेरबदल गर्दै, को-को बन्दैछन नयाँ मन्त्री ? यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको आन्तरिक तयारी थालेका छन् । श्रोतका अनुसार तत्काल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजपा नेताहरुसँग घनीभुत छलफल गरिरहे पनि अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, उपसभामुख र दुई नम्बर प्रदेश सरकारका विषयमा टुङ्गो लागेपछि संघीय सरकारमा सहभागी हुनु अगाडी आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने शर्त राजपा नेताहरुले अघि सारेका छन् । राजपाले अघि सारेका मागहरुको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना धकेलिएको देखिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा हाल रिक्त रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा हाललाई नेकपाबाटै पठाउने सोच प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको देखिन्छ । हाल यी दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका छन् । रिक्त प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा संसदीय दलका उपनेता सुवाषचन्द्र नेम्वाङलाई अघि सारेर सभामुखको प्रतिस्पर्धी रहेका अग्नी सापकोटालाई सहरी विकास मन्त्री बनाई व्यवस्थापन गर्ने गरी छलफल अघि बढेको नेकपा श्रोतले बताएको छ । त्यस्तै सभामुखको दाबी गर्दै आएकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख नभएमा कानुन मन्त्री बनाउने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।
त्यसो त यससँगै केही मन्त्रीहरुको फेरबदलको चर्चा पनि शुरु भएको छ । तर, यसले मूर्तरुप भने लिन सकेको छैन । सभामुखको निर्वाचन, पार्टी भित्र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन र सरकारलाई थप गतिशिल बनाउन मन्त्रीपरिषद तत्काल हेरफेर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुराको संकेत गत हप्ताको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा गरेको श्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीपरिषदमा फेरबदल गरेको डेढ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी फेरबदल को तयारी थालेका छ्न ।
आज भोलि नै केहि मन्त्री हटाएर नयाँ अनुहारहरु मन्त्रीमण्डलमा ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको श्रोतको बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा ३ फागुन २०७४ मा गठन भएको मन्त्रीपरिषदमा ४ मंसिर २०७६ मा फेरबदल गरिएको थियो । उक्त फेरबदलमा राज्यमन्त्री सहित नौ जनाको फेरबदल भएको थियो । त्यती बेला कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएका केही मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी भएपनि उनिहरु विभिन्न कारणले जोगिएका थिए । जोगिनेहरुमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, खेलकुदमन्त्री जगत बहादुर सुनार र खानेपानीमन्त्री विना मगर थिए । कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेको भन्दै उनीहरुको फेरबदल हुने चर्चा पनि बालुवाटारमा चलेको छ ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ले पार्टी र सरकार बिरुद्व अनुशासन विपरित प्रचारप्रसार र भ्रम छरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।नेकपा स्थायी कमिटी बैठक राखेर नेकपाले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको हो । पार्टी र सरकारका बिरुद्ध भ्रम छर्नेगरी अनुशासन र पद्धतीविपरित बोल्ने, लेख्ने, पार्टी नीतिविपरित भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रुपमा बिकास गर्नुपर्दछ । अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँनुपर्दछ ।’ अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।